Izindaba - Kungani ukhetha amaphrofayili we-aluminium wezimboni ocingweni lwangokwezifiso?
Kungani ukhetha amaphrofayili we-aluminium wezimboni ocingweni lwangokwezifiso?
Ngokuthuthukiswa kweThe Times, abakhiqizi abaningi bezimboni bathanda ukuhlomisa imishini yabo namarobhothi ocingweni, bedlala ukuhlukaniswa kokuphepha ukuvikela ukusebenza okujwayelekile kwemishini nokuphepha kwabasebenzi. Kuthiwani nge-aluminium yezimboni kocingo lwenkambiso? Kufanele kube kuhle! Futhi kuhle kakhulu! Ngoba iphrofayili ye-aluminium yezimboni inomqondo wesimanjemanje, futhi ilula futhi kulula ukuyisebenzisa, futhi imikhiqizo esekelayo kulula ukuyihlanganisa. Ngaphezu kwalokho, iphrofayili ye-aluminium uqobo inomsebenzi wokulwa nokugqwala nokulwa nokugqwala okulula ukukuhlanza. Ngezansi sizokwethula ucingo lwephrofayili ye-aluminium, ake siqonde izinto ezihlobene nocingo lwe-aluminium jikelele nezindlela zokucubungula, njalonjalo.
Uhlaka oluyinhloko locingo lwe-aluminium yezimboni imvamisa lungu-4040 no-4080. Imvamisa ekhoneni lekholomu, phezulu, indawo yokucindezela indawo eqinile yokusebenzisa iphrofayli ye-4080. Amaphrofayli womugqa ojwayelekile ayisikwele, imikhiqizo eqediwe ifakwe i-oxidized, ubuso bushelelezi. Ikakhulukazi ngemuva komkhakha we-4.0, ama-workshops amafektri amaningi asezimboni adinga uthango lwephrofayili ye-aluminium ukuqinisekisa ukuphepha kwamaworkshops.
Ukusetshenziswa kwephrofayili ye-aluminium yezimboni ukucutshungulwa kocingo ngokwezifiso, umhlangano ulula kakhulu, ingxenye yokuxhuma inikezelwe ukuxhumeka kwezesekeli. Sidinga kuphela ukucubungula ngokuya ngemidwebo eyakhelwe ngaphambili, izibhobo zezibhakela nezintambo zokuthepha, ezilungele ukuhlangana. Ngezansi kocingo kubuye unyawo olukhethekile, olungalungiswa noma luhanjiswe. Kulula kakhulu ukuhlanganisa nezesekeli ezikhethekile.
Ngaphezu kwalokho, ngokwezifiso zezimboni aluminium ocingweni ukukhethwa kwezinto ezisizayo, imvamisa i-acrylic, ukukhanya okuvikelayo, ibhodi elilangazelela ilangabi, i-plexiglass njalonjalo. Amanye amakhasimende azokhetha igridi emnyama engama-40 kuye kwangama-40. Lapho usebenzisa lezi zinto ezisizayo, udinga nje ukuzifaka esilinganisweni esigcinelwe iphrofayli, esilungele kakhulu ukuxhumana okungenamthungo.